Ipenthouse yodidi engaphantsi kweemitha ezingama-50 ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
Ipenthouse yodidi engaphantsi kweemitha ezingama-50 ukusuka elunxwemeni
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCatharina
I-penthouse ifakwe kakuhle kakhulu. Ikhitshi eligqibeleleyo elinefriji yaseMelika, ifriji yewayini, isitya sokuhlamba izitya, isitovu, ihobhu yokukhupha, ioveni kunye nemicrowave. Amagumbi okulala ama-4 onke ane-air conditioning kwaye kwigumbi lokuhlala kukho ii-air conditioners ezi-2 zomoya oshushu kunye nobandayo. Iziko lombane libonelela ngokufudumala kunye nomoya ebusika xa kusihlwa kunokuba pholile. Ebudeni bemini, iqondo lobushushu ebusika kule ndawo yaseSpain limalunga nama-21 degrees okanye ubushushu.
Singathanda ukuba ufumane i-penthouse yethu ekhethekileyo, enendawo yangaphakathi ye-160 m2 kunye nophahla lwe-130 m2, kule ndawo intle yaseSpain. Siza kukwamkela ngesiselo kunye ne-snack kwaye siya kukubonisa ngeenxa zonke kwi-penthouse. Izindlu zangasese ezitofotofo, indawo ethandekayo yokuhlala eneziko kunye ne-TV yesikrini esisicaba esinamatshaneli angama-1,150 kuzo zonke iilwimi. Ebusika kukho ii-bathrobes, iitawuli zaselwandle, iitawuli ze-pool kunye neetawuli.Ngaphandle kwi-terrace yangaphambili unokonwabela iisofa ezithandekayo zokuphumla kunye ne-hammock enombono omhle wolwandle. Kugqatso olungasemva oluphangaleleyo olunombono weentaba, ungasebenzisa ii-sunbeds okanye ukonwabele isidlo sangokuhlwa eside kwitafile yokutyela yabantu abasi-8 phantsi kwe-pergola yothando. Ungatya eyona paella incasa kuhambo lwemizuzu emi-2 ukusuka kwi-penthouse kunye nepizza emnandi ungaya echwebeni uhambo lwemizuzu eli-10.
Ipenthouse ibekwe ngaphantsi kweemitha ezingama-50 ukusuka kolona lwandle luhle kakhulu lwaseMazarron kunye neebar ezi-2 ezithandekayo zolwandle ezinerenti yebhedi ngeeeuro ezimbalwa. Ukuba ukhetha ukuhlala elunxwemeni kunye nezitulo zakho, zikulungele kwi-penthouse kunye nebhokisi epholileyo kunye ne-parasol.
Umbuki zindwendwe ngu- Catharina
Umamkeli wethu okanye sihlala sikulungele ukuba kuyimfuneko.